अभिनेता शिव श्रेष्ठ र भुवन केसीसहित यी कलाकारहरु राप्रपा प्रवेश ! – Sandes Post
April 4, 2022 333
काठमाडौं । अभिनेताद्वय शिव श्रेष्ठ र भुवन केसीसहितका कलाकारहरु राप्रपा प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेका छन् । उनीहरुलाई पार्टी प्रवेश गराउन प्रक्रिया सुरु भएको राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताए ।
यस्तै चर्चित अभिनेता निखिल उप्रेती पनि राप्रपा प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेका स्रोतले जनाएको छ । यसअघि हिन्दू राष्ट्र र एकीकृत नेपालको नारासहित एकीकृत शक्ति नेपाल नामक मोर्चामा रहेका उनी केही दिनमै राप्रपा प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेका स्रोतले जनाएको छ ।
हिन्दू राष्ट्र र एकीकृत नेपालको नारा राप्रपासँग मेल खाने र उदेश्य एउटै भएकोले यो मुद्धामा सहमत हुने सबै एकताबद्ध हुनुपर्ने निर्णयसहित उनी राप्रपा प्रवेशको तयारीमा रहेका हुन् ।
मोर्चाको सक्रिय सदस्यको रुपमा निखिल समेत रहेका थिए । अभिनेत्री मनीषा कोइरालालाई पनि समूहमा ल्याउने प्रयास भएको थियो । तर कोइरालासमेत राप्रपामा जाने तयारी भएसँगै अभिनेता उप्रेतीसमेत राप्रपा प्रवेश गर्ने तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ ।
यस्तै कलाकार दीपकराज गिरीको बारेमा सार्वजनिक भएको एउटा खबरले उनलाई निक्कै तनाव बनायो । केही दिनअघि माओवादी केन्द्र प्रवेश गरेको भनेर प्रकाशित भएको खबरले उनलाई धेरैले फोनसमेत गरे ।
अहिलेसम्म आफू कुनै पनि पार्टीमा प्रवेश नगरेको कलाकार दीपकराज गिरीले बताएका छन् । आफू माओवादीमा प्रवेश भएको समाचारको हेडलाइन आएको र त्यसलाई हेरेर फोन र म्यासेज आएर हैरान भएको उनले प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
Prevसुनको मूल्य आज भने घट्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
Nextबिरामी भएर छोराको मोटरसाइकलको पछाडी बसेर अस्पताल गएकी थिईन आमा